Kareena Oo Ka Gudoomeyso Abaal Marin Aishwarya Rai, laakinse Wajigeeda Caro Ka Muuqdo. Xasuusti 2001 Iyo Sababta Ka Dambeyso Oo La Ogaadey - Hablaha Media Network
Kareena Oo Ka Gudoomeyso Abaal Marin Aishwarya Rai, laakinse Wajigeeda Caro Ka Muuqdo. Xasuusti 2001 Iyo Sababta Ka Dambeyso Oo La Ogaadey
HMN:- Kareena kapoor aya wajigeeda caro ka muuqdey markey masraxa soo fushey iyado abal marinta best face ka gudoomeyso Aishwarya Rai.
Sheekadani aya maalmihi ugu dambeeye hadal heententeda ka socotey baraha bulshada. Kareena aya xiligas (200o) shaashada kalaso muuqatey Abishek Bachchan filimka Refugee waxeyna ku guuleysatey abaal marinta face of the year 2001.
Waxaa la isweydiinaye sababta ka dambeyso carada ka muuqatey wajiga Bebo, markey masraxa saarned. Waxa inta dheer Kareena hadalkeda mahadnaqa meysan ku dheeran Sido kale iyadon daadihiyasha abal marinta umahad celinin ayey masraxa kadagtey.
Sababta kadambeyse Kareena waji gabaxeeda oo mudo dheer kadib la ogaadey:
Kareena Kapoor aya la rabey iney ka laso muuqato Hrithik Roshan filimkisa ugu horeeye ee Kaho Na Pyar Hai. Wararka aya dhigayeen Rakesh Roshan inuu rabey Kareena filimkeda u horeeye lasameyso Hrithik sida darted waxey saxiixdey doorka Sonia filmka.
Lakinse gadaal dambe kareena aya heshiiska kabaxdey. Rakesh Roshan aya u dhaqaaqey Amisha Patel doorkasi waxeyna ku noqotey xidig caan baxey filimka Ka Hoona Pyaar Hai.
Isla xaflada ey Kareena ku gudoontey abal marinta the Face of The Year award, Ameesha Patel aya la gudon siiye abal marinta The Best Debut (female) ee filimka blockbuster noqdey Kaho Naa Pyaar Hai. Sidaasi darteed Kareena aya muujineyso waji gabaxa fursada ey iska lumisey.
Kareena Kapoor taasi kaliya ma ahan fursada qaaliga ah ey iska lumisey balse waxa kaloo soo mareen fursado fiican. Waxey iska diidey filimada Black, Hum Dil De Chuke Sanam, iyo Kal Ho Naa Ho iyo kuwa kale oo gadal dambe galeen taariqda Indian cinema.
Warbixintaan Waxaa Soo Diyaariyay Soona Turjumay Yahye Yusuf………………….